I-Ovulation 101: Imijikelezo, iikhalityhuleyitha, kunye nokukhulelwa - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Ulwazi Lweziyobisi Imidlalo Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Iindaba Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ukuzonwabisa Ekuhlaleni Impilo-Ntle Iindaba, Impilo Imidlalo Enzima Iindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Uluntu, Inkampani Impilo
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> I-Ovulation 101: Funda ngakumbi malunga nemijikelezo, iikhalityhuleyitha kunye nokukhulelwa
I-Ovulation 101: Funda ngakumbi malunga nemijikelezo, iikhalityhuleyitha kunye nokukhulelwa
I-Ovulation yinxalenye yomjikelo wokuya exesheni kwabasetyhini xa ii-ovari zikhupha iqanda. Ukwazi ukuba yintoni i-ovulation, ixesha le-ovulation, kunye nendlela yokulandelela yindlela elungileyo yokuhlala uhambelana nomzimba womntu. Ukwazi xa bavuthayo kunokunceda abantu basetyhini kuphephe ukumitha okanye bancede bakhulelwe. Makhe sijonge kwiziseko ze-ovulation kunye nee-FAQ malunga nocwangciso losapho.
Umjikelo we-Ovulation: Kwenzeka nini i-ovulation?
Ovulation kwenzeka kanye ngenyanga kubafazi. Nanku umgca wexesha lomyinge wokuba sexesheni:
Ukuba sexesheni (iintsuku 1-7): Ukuphalazwa kwethamo lesibeleko
Isigaba esilandelayo (iintsuku 1-14): Iifollicles zikhula zibe ngamaqanda aqolileyo
Ovulation (iintsuku 14-15): Iqanda eliqolileyo liyakhutshwa lize liye esibelekweni ukuze lichumise
Isigaba seLuteal (iintsuku 16-28): Iqanda liyachunyiswa kwaye umzimba uvelisa iprogesterone ukuxhasa ukukhulelwa kwangoko, okanye iqanda alichunyiswa kwaye umgca wesibeleko uyaqhekeka
Ukuya exesheni kunye nenqanaba lokulandelwa
Umndilili wokuya exesheni usebenza kumjikelo weentsuku ezingama-28, kusuku lokuqala lwexesha lokumakisha usuku lokuqala, kunye nosuku lokuqala lwexesha elilandelayo lokumakisha usuku lwama-28. Isiqingatha sokuqala somjikelo womfazi sibizwa ngokuba sisigaba sabalandeli. Ngeli nqanaba, amanqanaba e-estrogen ayenyuka, kwaye i-pituitary gland ikhupha i-hormone evuselelayo (FSH), evumela iifollic ezimbalwa ukuba zikhule zibe ngamaqanda aqolileyo. Nangona kunjalo, kuphela iqanda elinye elikhutshwa ngexesha lokukhulelwa.
Ukuvuthwa kwenzeka malunga neveki ezimbini emva kosuku lokuqala lokuya esikhathini. Ke ukuba ixesha libonisa usuku lokuqala komjikelo wokuya exesheni, oku kuthetha ukuba umhla we-ovulation uya kuba malunga nemini ye-14, phakathi kwinqanaba lokuya exesheni.
Ngexesha le-ovulation, iqanda lihamba lityhutyhe ityhubhu liye kwisibeleko, apho linokuchuma khona. Umfazi unokukhupha kuphela umjikelo omnye, kodwa kunokwenzeka ukuba ukhulule iqanda elinye kwi-ovary nganye. Ukuba oku kuyenzeka kwaye umfazi ukhulelwe, baya kuba namawele angafaniyo. (Amawele afanayo avela kwelinye iqanda elichumayo lahlula kwiikopi ezifanayo.)
Eli xesha le-ovulatory lelona xesha lilungileyo lokukhulelwa. Nangona ixesha lokuvuthwa lifutshane, lihlala malunga neeyure ezili-12 ukuya kwezi-24, abasetyhini banokukhulelwa ukuba baba neentlobano zesini usuku ukuya kwiintsuku ezintlanu ngaphambi kokukhutshwa kwe-ovulation. Isidoda sinokuphila kwinqanaba lokuzala labasetyhini kangangeentsuku ezininzi. Ukuba khange abelane ngesondo ngokungakhuselekanga ngaphambi kwe-ovulation okanye ngexesha layo, owasetyhini ngekhe akwazi ukukhulelwa de kube lixesha elizayo xa evota.
Ezinxulumene: Elona xesha lokuthandana evekini
Isigaba se-luteal silandela i-ovulation, sihlala malunga neentsuku ezili-14, kwaye siphela ngosuku lokuqala lomjikelo wesini sowasetyhini. Ukuba iqanda lichumisiwe, umzimba uya kuqhubeka ukuvelisa iprogesterone kwaye umgca wesibeleko uya kuxhasa ukukhulelwa kwangoko. Ukuba iqanda alichumisi, liyaphuma esibelekweni ngomhla wama-28 womjikelo wokuya exesheni ngokuqala kwexesha lokuya exesheni njengokuba umaleko wesibeleko ungqengqa. Ixesha eliqhelekileyo lomfazi lihlala iintsuku ezintathu ukuya kwezisixhenxe.
Iikhalityhuleyitha ze-Ovulation: Ulandela njani i-ovulation
Itekhnoloji yakutshanje yenze ukuba ukulandelela i-ovulation kube lula kakhulu. Zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwabasetyhini nakwababini abafuna ukukhulelwa okanye ukunqanda ukukhulelwa ngokulandela umkhondo we-ovulation.
Nazi ezinye zeendlela zokulandela umkhondo we-ovulation:
Inkqubo yokulandelela umjikelo wokuya exesheni
Imilinganiselo yeqondo lobushushu bomzimba
Ukulandelwa kwemveliso yencindi yomlomo wesibeleko
Eyona ndlela yokufumanisa ukuba i-ovulation iyakwenzeka nini, ngakumbi umntu obhinqileyo ozama ukukhulelwa, kukusebenzisa izixhobo zokuxela ovulation, zovavanyo lomchamo olufumanisa i-luteinizing hormone (LH) -hormone eqala i-ovulation. U-Eric Flisser , MD, ugqirha obelekisa ugqirha wesibeleko e Amaqabane oNyango lokuZala eNew York . Ngokwesiqhelo, xa kuvavanywa kuvavanyo oluqinisekileyo, i-ovulation iyakwenzeka kwiiyure ezingama-24 ukuya kuma-48.
Thetha ne-OB-GYN yakho ukuze ufunde ngakumbi malunga nendlela yokulandela umkhondo we-ovulation kunye neendlela ezahlukeneyo zokulandela umkhondo.
Ngaba i-ovulation kuphela kwexesha onokukhulelwa ngalo?
Olona suku lufanelekileyo lokumitha ngumhla wokukhutshwa kweqanda okanye usuku olulandelayo — ngesiqhelo iintsuku ezili-14 ukuya kwezili-15 kumjikelo wokuya esikhathini. Nangona kunjalo, abasetyhini banokukhulelwa kwiwindow yabo evundileyo, leyo ingumhla wokukhutshwa kweqanda kunye neentsuku ezintlanu ngaphambi kwayo (iintsuku 10-15). Isidoda sinokuhlala kwindawo yokuzala kangangeentsuku ezininzi. Abasetyhini abayi kukwazi ukukhulelwa emva kwe-ovulation kude kube ngumjikelo olandelayo.
Wazi njani ukuba ovating?
Iintlungu zokuvuthwa zihlala zibonakalisa okokuqala kwabasetyhini abaninzi ukuba bayayikhupha. Nazi ezinye zeempawu ze-ovulation:
Iintlungu ezisezantsi esiswini ezenzeka kuphela kwicala elinye
Kancinci ukunyusa ubushushu bomzimba
Umqondo ophakamileyo wevumba
Ukuba akukho nanye kwezi mpawu zikhoyo, abasetyhini banokukwazi ukuba ngaba bavota ngokusebenzisa ikhalenda ye-ovulation, i-ovulation predictor kit, okanye ngokulandela umkhondo wabo wokuya exesheni ngezinye iindlela.
Ngamanye amaxesha iintlungu zokuvuthwa zibizwa iintlungu eziphakathi , evela kumagama esiJamani phakathi kunye nentlungu ngenxa yokuvela kwayo phakathi komjikelo wokuya esikhathini. I-ovulation ebuhlungu inokuba luphawu lokuba umzimba ukulungele ukukhulelwa. Nangona kunjalo, ukungabi nantlungu ye-ovulation akuthethi ukuba ungazali. Uninzi lwabafazi banesifo se-asymptomatic xa be-ovating.
I-ovulation ebuhlungu iyenzeka kubafazi abaninzi, kodwa ukufumana iintlungu akuthethi ukuba akukho nto iphosakeleyo. Intlungu yokuvuthwa yinto eqhelekileyo kwaye yenzeka ngenxa yendlela umzimba osebenza ngayo. Ngaphambi kokuba iqanda likhutshwe kwi-ovary, liyakhula kwaye linokubangela ukuba i-ovary ikhulise, enokubangela iintlungu kwelinye icala lesisu. Iqanda elikhutshiweyo lihamba nolwelo olulandelelanayo kunye negazi elincinci, elinokucaphukisa isisu kunye nokubangela iintlungu.
Nazi ezinye zeempawu abasetyhini abanokuthi babenazo xa bevota:
Intlungu okanye iintlungu ezisezantsi esiswini
Nazi ezinye iindlela zokunciphisa iintlungu ze-ovulation:
Sebenzisa iphedi yokufudumeza
Thatha ibhafu eshushu
Zama amayeza eentlungu zekhawuntareni njengebuprofen
Iintlungu zesisu, ukubona, okanye ezinye iimpawu ezingahambi emva kweentsuku ezimbalwa kunokufuna unyango oluthile. Umboneleli wezempilo unokujonga iimeko zempilo ezinokubangela ukuba ezi mpawu ziqhubeke okanye zibe mbi.
Wonke umntu uya kufumana i-ovulation kancinci ngokwahlukileyo, kodwa i-ovulation engaqhelekanga inokukhokelela kwiingxaki zokuzala kunye nokungakwazi ukukhulelwa. Nazi ezinye zeemeko ezinokuthi zichaphazele impilo yabasetyhini:
Ukonakala okanye ukuvalwa kweetyhubhu
Ukuphazamiseka kwe-Ovulation njenge-polycystic ovarian syndrome ( I-PCOS ) okanye ukungasebenzi kakuhle kwe-hypothalamic
Iingxaki zomlomo wesibeleko
Ukuveliswa okugqithisileyo kwehomoni prolactin yidlala yebhinqa
Uyenza njani i-ovulation
I-OB-GYN ngoyena mntu ubalaseleyo ukuba acele ingcebiso yezonyango malunga nokuba wenze ntoni ngokulandelayo xa kufikwa kumba we-ovulation okanye iingxaki zokuzala. Unokunceda ekuchongeni nasiphi na isizathu esingunobangela kwaye unokucebisa ngesicwangciso sonyango esibandakanya enye okanye ezingaphezulu kwezi zilandelayo:
Utyando lwe-fallopian tube
Ukutshintsha indlela yokuphila njengokuzilolonga kunye nokutya usempilweni
Ukukhuthaza i-ovulation ngamachiza okuzala
Nazi ezinye iziyobisi ezichaziweyo zokuchuma ezinokuthi zichongwe yi-OB-GYN yakho okanye icebise ukwenza i-ovulation:
Iziyobisi eziqhelekileyo zokuchuma
I-Serophene (i-clomiphene citrate) UFemara (letrozole) IMenopur (imenotropin) Iswekile yeglucophage (metformin HCl)
Ingaba isebenza kanjani Yonyusa imveliso yehomoni ye-FSH kunye ne-LH Inika i-ovulation ngokwandisa imveliso yehomoni ye-FSH Inaliti ye-FSH kunye ne-LH yokukhuthaza i-ovulation ngaphambi kwe-IVF Iphucula ukunganyangeki kwi-insulin, enokubangela i-ovulation
Imiphumela Ukuphazamiseka kwesisu, intloko ebuhlungu, ukuthamba kwebele Ukutshisa okushushu, ukulahleka kweenwele, iintlungu zemisipha, ubuthathaka Indawo yokufaka inaliti, ukudumba, intloko ebuhlungu Ukugabha, urhudo, incasa yentsimbi emlonyeni
Umthamo osemgangathweni 1, 50 mg ithebhulethi kube kanye ngemini kangangeentsuku ezintlanu ukuqala ngomhla we-5 wokuya exesheni 1, 2.5 mg ithebhulethi kanye ngemini, iintsuku ezintlanu (ngeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-7 zokuya exesheni) ngaxeshanye yonke imihla Iiyunithi ezingama-75 zitofwe phantsi kolusu njengoko kuyalelwe ngugqirha I-1, 1000 mg ye-tablet 2-3 amaxesha ngemini ngokutya
Iindleko $ 30- $ 40 nge Ikhuphoni elilodwa $ 17- $ 70 nge Ikhuphoni elilodwa $ 400- $ 420 nge Ikhuphoni elilodwa $ 4- $ 20 nge Ikhuphoni elilodwa
I-coronavirus ibuchaphazela njani ubomi bemihla ngemihla baseMelika?
Iingoma ezigqibeleleyo zokuSebenza zeCardio Sweat Sessions
Zithini ii-ace inhibitors ezisetyenziselwa ukunyanga
ungathatha i-metformin kunye ne-glipizide ngaxeshanye?
ngaphezulu kwekhawuntari yeyeza lokurhawuzelelwa kwilungu lomzimba
ndingazi njani ukuba intliziyo yam iphilile
kukhuselekile ukuthatha ii-antibiotics ngexesha lokukhulelwa
yintoni intlungu endinokuyithatha nge-zoloft